I-amazon cyber ngoMvulo ijongana ngoku
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IAmazon Cyber ​​yangoMvulo ijongana ngoku
NgoLwesihlanu omnyama u-2020 ulapha, kwaye oko kuthetha ukuba umntu unokuhlala ebaleka esenza ezinye izinto ezimbi zobuchwephesha ngelixa ubrawuza iAmazon & apos; indawo enkulu yokugcina indawo. Kwaye ngoku ukuba ukukhawuleza kokuqala kudlulile, kukwathetha ukuba abathengi kufanele ukuba bajonge ezinye zeentengiso zeCyber ​​Monday.
Unikezelo kunye neapos oya kulifumana kweli phepha zigcinwa zisemgangathweni, ke ukuba ujonge ukubamba into ngesaphulelo esihle, qiniseka ukuba ujonga rhoqo.
Ukuba ujonge ukwenza umnatha obanzi ukuze ubambe izivumelwano, sinokukunceda nawe. Eyona ilungileyo igutyungelwe yeyethu NgoLwesihlanu omkhulu omnyama kunye noMsombuluko ngeCyber ​​benza inqaku Ngelixa amadili athile ngakumbi avela kubathengisi abakhulu anokufumaneka kuthi Eyona nto ithengwayo yokuthenga okuMnyama ngoLwesihlanu kunye neCyber ​​ngoMvulo thumela, Eyona Walmart emnyama yangoLwesihlanu kunye neCyber ​​ngoMvulo kwaye, ewe, sinayo Eyona njongo ijolise kuLwesihlanu oMnyama kunye neCyber ​​ngoMvulo njengokuba!
Gcina i $ 200 kwi-OnePlus 8 Pro
Isenokungabi yifowuni ye-OnePlus yamva nje, kodwa I-OnePlus 8 Pro Ngokuqinisekileyo yeyona projekthi iphambili ye-OnePlus yowama-2020. Yiyo kuphela ephethe ukutshaja ngaphandle kwamacingo, umzekelo, into ekufuneka ubenayo kubasebenzisi abaninzi abaphambili. Ewe kunjalo, kukwayeyona fowuni ibiza kakhulu ye-OnePlus ukuza kuthi ga ngoku. Ewe, ngoku unokufumana uguqulelo lwe-12 + 256GB nge $ 200 ngexabiso eliphantsi. Yifowuni enamandla kakhulu eya kukusebenzela kakuhle kwiminyaka ezayo. I-OnePlus inerekhodi enkulu yokuhlaziya kunye nohlaziyo lwesoftware, ke wena & apos; uya kukonwabela ubuncinci iinguqulelo ezimbini ze-Android.
Gcina i-150 yeedola kwi-Samsung Galaxy S20 FE 5G
Gcina i $ 200 kwi-Galaxy S20 5G
Gcina i-250 yeedola kwiGlass ye-20 ye-Ultra 5G
Gcina iipesenti ezingama-25 kwiGalaxy Note 5G
Gcina i-100 yeedola kwi-Galaxy A71
Gcina $ 150 kwiGPS S10 Lite
Gcina $ 50 kwiGoogle Pixel 5
Gcina i-60 yeedola kwi-Samsung Galaxy Watch 3
Iidola ezingama-60 isenokungabi lolona londolozo lunengeniso wena & apos ubonile, ukuba siqinisekile ngazo. Kodwa kwimveliso ephume kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo, ayisiyonto imbi kangako. Inkqubo ye- Galaxy Watch 3 I-Samsung & apos; iiwatchwatch zamva nje kunye nezona zibalulekileyo ezinjenge-ECG kunye nokulinganisa i-oxygen oxygen. Ukuba usebenzisa i-fowuni ye-Android, yenye yezona smartwatches zibalaseleyo onokuzifumana ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi, jonga eyethu Uphononongo lweGalaxy Watch 3 .
Gcina i-70 yeedola kwi-Galaxy Watch Active 2 44mm
Gcina i-50 yeedola kwiFitbit Charge 4
Ukuba ufuna i-tracker yokomelela komzimba hayi i-smartwatch epheleleyo, iFitbit Charge 4 inokuba yile nto uyifunayo. Ibonisa uyilo olucekeceke, olwenziwe ngokwezifiso kunye nokubonelela nge-GPS eyakhelweyo, ukulandelela ukulala, kunye nezivamvo zentliziyo.
Gcina i- $ 15 kwiAmazfit Bip S.
Le yayisele iyi-smartwatch enkulu yohlahlo-lwabiwo mali kwaye iyinto eyebiweyo ngexabiso elitsha elincitshisiweyo. Inika uyilo olukhanyayo kwaye lutofotofo kwaye inikezela ngobomi bhetri obukhulu.
Gcina i $ 350 kwi-Sony Xperia 1
I-Sony & apos; i-2019 yeflegi yefowuni, i-Xperia 1, yeyona fowuni ilungileyo kodwa eyona nto iphambili kuye lixabiso. Ewe, ngesi sivumelwano, ingxaki yexabiso isonjululwe kwaye unokufumana ifowuni yeprimiyamu ngexabiso eliphantsi. Ukuba unomdla kwesi sixhobo kwaye ufuna ukufunda ngakumbi, jonga eyethu Uvavanyo lweXperia 1 .
Gcina kwii-smartphones ze-Motorola
Gcina ngaphezulu kwama- $ 70 kwiifowuni zeMoto G
Ukuba ujonge ukufumana ifowuni yokugcina okanye enye yomntwana wakho okanye isalamane esikhulileyo, isixhobo seMoto G sinokulunga. Baxabiso eliphantsi kwaye bakhiwe kakuhle kwaye baya kusebenzela umnini wabo ngokulungileyo. Nokuba sesona sixhobo siphambili, zininzi ngakumbi kunesidima ngaphandle kokuba ulindele imimangaliso evela kwiikhamera okanye ekusebenzeni komdlalo.
Kwaye ngoku, enkosi kwiAmazon, unokufumana i-Motorola smartphone engabizi kakhulu. Izibonelelo ezikhoyo zeMoto G Power kunye neMoto G7 Play. Amagama athetha ngokwaneleyo malunga nefowuni nganye kunye namandla. Amandla eG eza nebhetri enkulu ye-5,000mAh kwaye i-G7 Play yeyona inexabiso eliphantsi phakathi kwabo, indlela ephantsi kwe- $ 200.
Gcina i $ 300 kwi-Motorola Edge
Gcina i $ 50 kwi-Samsung Galaxy Tab A- 10.1 'yeCwecwe
Ukuba awukho kwi-ecosystem yeApple kwaye ujonge ithebhulethi enexabiso eliphantsi ukubukela imiboniso kunye nokwenza ukhangelo ebhedini, iGlass Tab A lukhetho olukhulu, ngakumbi ngoku ngexabiso lalo elincitshisiweyo. Ithebhulethi iza nomboniso wepikseli ka-1920x1200, izithethi eziqinisekisiweyo zeDolby Atmos kunye nento ebizwa ngokuba yiSamsung 'ibinge-efanelekileyo' ibhetri ebonelela ngamandla aneleyo ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-10 zokudlala ividiyo.
Gcina iipesenti ezingama-50 kwi-Sennheiser HD 450BT yeBhloko yeBluetooth engenazingcingo
Ukuba uSennheiser nguwe ongumenzi wee-headphones ozikhethelayo, usengonga imali uthenge ukufumana isibini esinee-headphone ezingenazingcingo. I-HD 450BT iphantsi nge-100 yeedola okwangoku, ekubuyiseni okuhle onokuchitha kwenye into. Iiyure ezingama-30 zobomi bebhetri ziya kukugcina ukonwaba ngohambo olude kwaye i-ANC iyakuhlala iphazamisa ingxolo kude.
Gcina $ 150 kwi-Sennheiser PXC 550-II yeBluetooth engenazingcingo
Ukuba & apos ufuna i-headphones ze-Sennheiser eziphezulu, unenhlanhla. I-Sennheiser PXC 550-II nayo iyaphungulelwa ixesha elilinganiselweyo ngama-42%. Ngabo, wena kunye neapos; ufumana ingxolo ephambili yeNoiseGard eQhelekileyo yokuCima ukwahlukana okungcono kwindawo enengxolo. Ewe kunjalo, abaqhubi nabo bangcono ngenxa yokufumana amava omculo aphuculweyo. Ukongeza, beza nekomityi efanelekileyo yokuthinta ekuvumela ukuba ulawule ivolumu, udlale kwaye umise umculo kwaye uphendule iifowuni ngaphandle kokwenza umthwalo uyilo ngamaqhosha.
Gcina i-100 yeedola kwi-Shure AONIC 50 yeBluetooth engenazingcingo yeNtloko
I-Shure lelinye igama elikhulu kumzi mveliso weaudio kwaye ii-headphone zenkampani kunye neapos zihlala zihlala zibiza kakhulu. Ewe, ngoku ungagcina i-25% kwenye yee-Shure & apos, ii-headphones ezingenazingcingo ezingenazingcingo, i-AONIC 50. Uyilo lwezi ntloko zinobuqili kodwa ubungakanani be-shear butsalela ingqalelo, okuyinzuzo okanye ukubuyela umva kuxhomekeke kuhlobo luni umntu onguye. Yintoni efanayo kuwo wonke umntu, nangona kunjalo, bubomi bebhetri yeeyure ezingama-20 kunye nokucinywa kwengxolo okusebenzayo. Ngokucacileyo, kuya kufuneka ulindele ukuba isandi sibe phezulu.
Gcina iipesenti ezingama-50 kwi-JBL LIVE 300 yeNtloko yeNtambo ezingenazingcingo
Ukuba ukwabelana ngeengoma zakho ayisiyiyo into yakho, akukho & apos ikhona imveliso yeJBL onokuthi uyiqwalasele. I-JBL Live 300 TW zeendlebe zibonelela ngexesha lokudlala elihloniphekileyo leyure ezi-6 kwityala elinye, kunye neentlawulo ezimbalwa kwityala lokuthwala. Ukuba wena & apos; ujonge ukufumana i-earbuds ezingenazingcingo zepremiyamu ngezantsi kwe- $ 100, ngoku lixesha lokutsala i-trigger.
Gcina i-40 yeedola kwiJabra Elite 75t True Wireless Earbuds
IJabra iye yaziwa ngexabiso layo kumgangatho olungileyo kunye neJabra Elite 75t ayikho ngaphandle. Banoyilo olungacacanga kunye nesandi esinamandla esinokukholisa wonke umntu ngaphandle kwabo baneendlebe ezicokisekileyo. IJabra Elite 75t iza nokucinywa kwengxolo okusebenzayo, nto leyo ebekelwe icandelo leprimiyamu kodwa amaxabiso asengqiqweni, ngakumbi ngoku ngesaphulelo sama-22%. Unokufikelela kwiiyure ezingama-7.5 zokudlala kunye ne-ANC kwaye ukuba usebenzisa i-ANC kunye nazo zonke iindleko ezongezelelweyo zetyala, unokufikelela kwiiyure ezingama-24 zobomi bebhetri zizonke.
Gcina $ 60 kwi Sony WF-1000XM3 True Wireless Earbuds
I-Sony & apos; top-of-the-line-earbuds ezingenazingcingo nazo zikwizaphulelo eAmazon ngoku. Banesona sandi silungileyo sokurhoxisa phakathi kweendlebe, ikakhulu ezicel'umngeni yi-AirPods Pro. Kodwa ukuba ungumsebenzisi we-Android, wena & apos; kunokwenzeka ukuba uzenzele ezi zinto. Elona cala liphambili kwezi ubungakanani, zona zininzi kakhulu ngenxa yee-earbuds kwaye ayinguye wonke umntu onokuziva ekhululekile ukuhamba nazo ezindlebeni zazo. Ngaphandle kwalonto, baya kwenza iqabane elikhulu lokumamela.
Gcina i-40 yeedola kwi-Samsung Galaxy Buds + True True Earbuds
Esinye isibini seendlebe ezithandwayo sikwahliswa ngesaphulelo kwiAmazon ngoku: I-Samsung Galaxy Buds + . Ngelixa bengenasandi sokurhoxisa ingxolo, bayakhanya ngobomi bebhetri obongezelelekileyo. Iiyure ezili-11 zexesha lokudlala ngentlawulelo enye yinto ephantse yangabikho nesinye isakhelo seendlebe esingenazingcingo esinokukunika sona. Ngale nto, ii-Buds + zibonelela ngexabiso lokuba ii-apos phantse zilunge kakhulu ukuba ungazidlulisa.
Gcina i-18% kwi-Samsung Galaxy Buds Live
I-Buds Live ziiSamsung kunye neeaposs ziyinyani yeendlebe ezingenazingcingo kwaye zikhangeleka ngathi azikho ezinye izibini kwintengiso. Amagqabi amile okwimbotyi alunga ngokufihlakeleyo ezindlebeni zakho kwaye anokukunika ukuya kuthi ga kwiiyure eziyi-5.5 zomculo wokudlala ngexesha elinye. Oko & apos; s ngengxolo esebenzayo yokucima. Owu, ewe, bane-ANC ngokunjalo. Ityala lokutshaja lixhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo ukuze uhlawule i-Galaxy Buds yakho ngasemva kwefowuni yakho ukuba ixhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo, uninzi lweefowuni eziphezulu zeGlass ezenzayo. Okwangoku, ungazithenga kwaye ugcine i-30.
Gcina $ 50 kwiiAmazon Echo Buds True Wireless Earbuds
Esinye isibini seBuds kodwa ezi zahlukile. Ezi ziiAmazon & apos eziyinyani yeendlebe ezingenazingcingo kwaye zona ngoku zisezantsi ngama-38%, zizenza zifikeleleke. Baza kukugcina ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-5 zokudlala ngexesha elinye kwaye, ngokwendalo, vumela wena ukuyalela iiAmazon & apos ze s Alexa ilizwi lomncedisi. Ukuba & apos; sele ulilungisile ikhaya lakho, kutheni ungandisi i-ecosystem ezindlebeni zakho?
Gcina iipesenti ezingama-50 kwi-Echo Show 5
Gcina iipesenti ezingama-55 kwi-Echo Dot (4th Gen) + kwi-Amazon Smart plug
Gcina iipesenti ezingama-30 kwiringi yentsimbi ye3
Gcina i-30% yoMlilo weTV kwi-Alexa Voice Remote
Gcina iipesenti ezingama-42 kwiAmazon Echo Dot
Ngelixa thina & apos sisasebenza ngesihloko seemveliso zeAmazon, sinokucebisa esinye isixhobo seEcho. I-Echo Dot sisithethi esincinci esithandekayo esinokusebenzisa kuzo zonke iintlobo zezinto, ukusuka ekuphulaphuleni umculo ukufumana ingxelo yemozulu kunye neendaba kusasa. It is cheap kakhulu ukuqala kodwa ngoku iapos iphantsi kwexabiso elingenakuphikiswa. Ukuba wena & apos ulungile ngokuba nezithethi ezikrelekrele kwikhaya lakho lonke, i-Echo Dot iya kukuvuyela ukunceda ukwandisa ubukho bomncedisi welizwi.
Gcina i $ 700 kwi-SAMSUNG 75-intshi ye-QLED 4K yeTV eyi-TV
Ukuba wena & apos ujonge ukuphucula iTV yakho ephambili, le 75-intshi ye-QLED Smart TV evela kwi-Samsung kufanelekile ukuba uyiqwalasele. Inetoni yetekhnoloji eyakhelwe ngaphakathi, kubandakanya iprosesa ye-AI enyusa umxholo ukuya kwi-4K kunye ne-120Hz yokuhlaziya inqanaba elidityaniswe nemowudi ye-Samsung kunye neapos; s Motion Rate 240 enciphisa intshukumo yokuhamba xa ujonge ezemidlalo okanye iimuvi ezikhawulezayo. Ngexesha elifutshane, ungagcina phantse isithathu sexabiso santlandlolo seTV, ke ungazicingi malunga nalo ixesha elide okanye ungaphoswa yile nto inkulu.
Gcina $ 120 kwi-TCL 40-intshi 1080p Smart LED ROKU TV
Ewe kunzima ukukholelwa kodwa i-TV ye-1080p iseyinto ngo-2020. Le isenokungabi yeyona ikhethekileyo kwigumbi lakho lokuhlala ukuseta imidlalo yeqonga, kodwa siyathandabuza ukuba umakhulu wakho angayikhumbula into yokuba i-TV yakhe ayisiyi-4K. Ukuba ufuna ukubonelela umntu ngeTV efanelekileyo ngaphandle kokuchitha imali eninzi, le modeli ye-intshi engama-40 ukusuka kwi-TCL lukhetho olukhulu, ngakumbi ngoku njengoko isaphulelo senziwe nge-40%.
Gcina i $ 300 kwiNkqubo yeZandi yeTheatre yaseVIZIO
Isandi esinamandla yinxalenye enkulu yamava okubukela imovie kwaye le Vizio Dolby Atmos inkqubo yesandi uya kuthi uzive ngathi ungathi ulungile kanye embindini wesenzo. Ewe, imivalo yesandi ayinikezeli ngamava ayinyani okusingqongileyo asasazeke kwigumbi lakho, kodwa kulula kakhulu ukuyifaka kwaye inike igumbi ukubonakala licocekile. I-sub-woofer ezinikezelweyo inokufakwa kwikona ye-oompf eyongezelelweyo. Ngoku, ungonga ngaphezulu kwama-30% kule bar yesandi yepremiyamu.
Gcina i-190 yeedola kwi-Samsung Soundbar ene-3D ejikeleze isandi
Ukuba awuthandi ukudibanisa kunye nokudibanisa iimveliso kunye neTV yakho ivela kwi-Samsung, ke le Samsung Soundbar iya kwenza udibaniso olukhulu kwigumbi lakho lokuhlala. Ibar yesandi inezithethi ezi-7 ezisebenza ngokudibeneyo ukukunika amava esandi esingqonge kwaye kukho ii-apos ze-sub-woofer ngaphandle kwamacingo ezinamandla. Ibar yesandi ixhasa ukudityaniswa kwezixhobo zeBluetooth, ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngokulula njengesithethi seBluetooth kwaye udlale umculo kwifowuni yakho. Okwangoku, i-Samsung HW-T650 3.1ch Soundbar iyaphungulwa phantse ngama-50%, eyenza ukuba ibe sisivumelwano esinenzuzo enkulu.
Gcina $ 50 kwi GoPro HERO8 Mnyama
I-GoPro yenza iikhamera zentshukumo zaziwa kwaye zikho kuyo yonke indawo. Kubonakala ngathi kwezi ntsuku wonke umntu uneGoPro ngaphandle kokujonga ukuba zingaphi na iindlela zokuzonwabisa ezifanele ukudutyulwa. Ukuba kunokwenzeka ukuba ube ngomnye wabambalwa abangenayo i-GoPro kwindawo yokugcina iimpahla, ngoku ungagcina imali xa uthenga imodeli ye-HERO8 yangaphambili. Inokuzinza okuhle kwevidiyo, eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na ikhamera yesenzo. Ayinamanzi, ke ngoko akukho mfuneko yamatyala ongezelelekileyo ukuyigcina ikhuselekile.
Gcina i-38% okanye nangaphezulu kwikhibhodi yeRazer, imouse okanye iseti yentloko
Ukuba ubulindele uLwesihlanu oMnyama ukuze uhlaziye izixhobo zakho zePC, wenze ukhetho olufanelekileyo. URazer unezaphulelo ezikhulu kwiimveliso ezintathu eziyimfuneko kumava emidlalo alungileyo.
Siqala ngekhibhodi yeRazer BlackWidow Elite Mechanical Gaming. Iibhodi ezitshixwayo zoomatshini, ngakumbi ezivela kwiinkampani ezinamagama ezentengiso, zihlala zibiza, kodwa iBlackWidow ngoku iphantsi ngama-50% kwiAmazon. Ewe, ikhibhodi inesibane esigcweleyo seRGB onokuthi wenze ngokwezifiso njengoko ubona kufanelekile. Isaphulelo senzelwe kuphela ukutshintsha koomatshini oluhlaza, kodwa ezo zibonakala ngathi zezona zikhethwa zithandwa njalo. Awungekhe & # 39; apos; uyigungqise ikhibhodi yeRazer ngaphandle kokusebenzisa imouse yeRazer. Ewe, ngokucacileyo unako, kodwa akuvakali ukuba kulungile. Ngapha koko, amaxabiso eempuku zeRazer kunye neapos; s Viper nayo ikhutshiwe ngama-50%. Imouse ine-sensor ye-16,000dpi, uyilo lwe-ambidextrous, ukukhanya kwe-RGB kunye namaqhosha amaninzi acwangcisiweyo ukuze wenze okungakumbi ngesandla sakho sasekunene. Kwaye okokugqibela, sineRazer Kraken yemidlalo yentloko. Izaphulelo zichazwe ngu 'kuphela' ama-38% esisesona sisivumelwano esihle. Ufumana iikomityi ezinkulu ezindlebe ezingaphezulu kwendlebe kunye nokugoba okuthambileyo okuxhasa isandi esingqonge i-7.1 yesandi sokuntywiliselwa ngokupheleleyo, imicu ebuyisekayo kunye nesakhelo esingasindi. Ayisiyonto ingakumbi onokuyifuna kwi-headset. Ngaphandle kweRGB, Oko kukuthi, le mveliso yeRazer isweleyo kodwa thina siqinisekile ukuba ungaphila ngaphandle.
Gcina i-80 yeedola kwi-eufy ngu-Anker Robot Vacuum Cleaner
Ewe, phakathi kwezinye izinto ezininzi, u-Anker wenza iizinto zokucoca iirobhothi. Njengazo zonke iimveliso zika-Anker, ziyafikeleleka ngaphandle kokulalanisa kumgangatho. Kwaye le ntengiselwano yenza ukuba ibe nexabiso eliphantsi, lehlise ixabiso nge-35%. Uneeyure ezingaphantsi kwe-24 zokusebenzisa, ke ukuba ufuna umncedisi weerobhothi azulazule kwaye acoceke ngelixa ekonwabisa / eyoyikisa izilwanyana zakho ngaxeshanye, ke ngoko kungcono wenze ngokukhawuleza.
Gcina i $ 100 kwiKhamera ye-Canon PowerShot G7X Mark III
Ukuba ujonge ukungena kwindawo yokuvota kodwa ikhamera yakho ye-smartphone ayiyinqumli, iCanon iyile into eyenzelwe loo mfuno. Le khamera yokuvota inokudubula kwi-4K kwaye ibonelele ngokuzinza komfanekiso. Ingasetyenziselwa ukusasaza ngqo. Owu, kwaye, ewe, ungathatha imifanekiso nayo. Kwaye inoyilo olujongeka njengokuphola kwakhona. Iikhamera ezinikezelweyo ezihlanganisiweyo ezinje ngokuba yimveliso ye-niche, kodwa ukuba ujonge ukufumana enye, unokugcina imali.
Gcina i-500 yeedola kwi-Canon EOS 6D Mark II Body
Ngoku leyo yikhamera enzulu. Ukusuka kubantu abathanda ukufota ukuya kwiingcali, i-EOS 6D uMarko II sisixhobo esihambelana neemfuno ezininzi. Ine-26.2 Megapixel enesakhelo esipheleleyo senzwa ye-CMOS efakwe ngaphakathi kumzimba ohambelanayo onomboniso we-intshi ezi-3 zokusebenzisa imenyu ngokulula kunye nokudubula. Okwangoku, iAmazon iyehla nge-28% kodwa kuphela emzimbeni. Ukuba awunazo iilensi ezifanelekileyo, kuya kufuneka uchithe imali eninzi ngaphambi kokuba uqale ukudubula.
Gcina i $ 70 kwiKhamera ye-Wireless Security yangaphandle
Ukutsiba lonke olunye uhlobo lwekhamera. Ukuba neekhamera zokhuseleko kuhlala kungumbono olungileyo kodwa ayinguye wonke umntu ozimiseleyo ukuqhuba kunye nokuhambisa iintambo ukuze kuzuze oko. Le khamera isombulula le ngxaki ngokuba nepaneli yelanga kunye nebhetri ukuze iqhubeke ebusuku. Isiginali yevidiyo inokudluliselwa nge-Wi-Fi okanye irekhodwe kwikhadi le-SD ebhodini. Ngokuqinisekileyo, ayizizo ii-discrete ezichanekileyo, kodwa loo nto yimibingelelo oya kuthi uyenzele ukulungiselela ngakumbi.
Gcina ama-32% kwiRing A19 Smart LED Bulb, 2-pack
Iibhalbhu ze-Smart zilungile. Ungazivula okanye uzicime kwifowuni yakho okanye ngokuxelela umncedisi welizwi ukuba akwenzele yona. Kwaye awunyanzelekanga ukuba ube sekhaya, ke ukuba awumki ngempela-veki, unokubavumela ukuba bavule ebusuku banike inkohliso yokuba umntu usekhaya kwaye uthintele uqhekezo. Ingxaki kukuba banokubiza, kodwa ngesi saphulelo, ixabiso liyanyamezeleka. Icala elisezantsi kukuba ezi aren & apos; t i-RGB, ngenxa yoko alikho gumbi elininzi lokukhanya kwemood, kodwa usenokulungelelanisa ukukhanya.
Gcina i-250 yeedola kwi-Samsung Galaxy Book S
Ukuba ukhangela into enexabiso eliphantsi kuneSurface Pro X, i-Samsung kunye neapos s Galaxy Book S sisithembiso esithandekayo. Iilaptop ezincinci ezincinci nezikhanyayo ezinobomi obukhulu bebhetri kunye ne-aluminium chassis yokomelela okuzinzileyo kunye nesitayile. Ngosetyenziso lweMicrosoft kunye neapos; Ifowuni yam, iGlass Book S ijika ibe sisongezo se-smartphone yakho, ngakumbi ukuba yi-Galaxy kunye nayo, iSamsung isebenzisana ngokusondeleyo neMicrosoft ukuzisa abasebenzisi be-Android amanqanaba afana nokudibanisa phakathi kwefowuni kunye nelaptop .
Gcina i $ 200 kwi-ASUS ZenBook Duo UX481 14 ”Laptop
IZenBook Duo ilaptop entle ekhethekileyo. Ingenayo enye, kodwa imiboniso emibini, eyesibini ibekwe ngaphezulu kwekhibhodi. Isikrini sesibini sikuvumela ukuba ukhulise imveliso yakho kwaye wenze ubomi bakho bube lula ngokwabela ezinye izixhobo zakho zemihla ngemihla kuyo kwaye ube nescreen sokuthengiswa kwezindlu kunye nesoftware yakho ephambili. Ilaptop inikwe amandla yi-Intel & apos; Core i7 10510U processor ebhangqwe nge-8GB ye-RAM kunye ne-512GB yogcino lwe-NVME. Ubeko lwebhodi yezitshixo kunye ne-trackpad yinto engaqhelekanga kodwa ukuba ungasebenzisa umboniso wesibini, loo nto yimibingelelo efanele ukwenziwa.
Gcina iipesenti ezingama-25 kwiSandi sokuma kweLaptop
Ukuba usebenzisa i-laptop njengendawo yokusebenzela yedesktop rhoqo kunokuba kungenjalo, indawo enje ngulongezo olukhulu kuseto lwakho. Nokuba usebenzisa i-apos; usebenzisa iliso langaphandle okanye hayi, ukuphakanyiswa kwelaptop kunezibonelelo ezininzi. Okokuqala, i-ergonomic ngakumbi, ucinga ukuba unebhodibhodi eyahlukileyo. Okwesibini, ivumela ilaptop yakho ukuba izipholise ngcono. Okwesithathu, igcina indawo edesikeni, kuba ungagcina izinto phantsi kwelaptop. Kwaye okwesine, ikhusela ilaptop yakho ekuchithekeni ngengozi kwamanzi, ikofu okanye ezinye iziselo onokuthi uzisebenzise okanye uzigcine macala onke. Ulwakhiwo lwale ndawo yokuma yomelele kwaye inokubamba kakhulu kuyo nayiphi na ilaptop, nokuba ingakanani na.
Gcina i-56% kwi-OLEBR 3-in-1 yokutshaja
Enye indawo yokuma, oku kuthetha ukubiza izixhobo zakho ze-Apple ngaxeshanye. Ungabeka i-iPhone, ityala le-Apple Watch kunye ne-AirPods Pro kwesi sitendi kwaye ubabize bonke bahlawulelwe kwimeko ehlelweyo. Akukho tshaja zibandakanyiweyo kwesi sitandi, ke kuya kufuneka uhambise ezo sele unazo. Isibonelelo sodwa kukuphuculwa kobuhle bedesika yakho okanye ukuma ebusuku. Okwangoku, ixabiso lale ndawo ayisiyo & apos liphezulu ngoku kwaye ngoku liphantsi nangaphantsi kunesiqhelo enkosi kule ntengiselwano yangoLwesihlanu oMnyama.
Yintoni uLwesihlanu oMnyama ajongene nokuyilindela kwiAmazon
Ngelixa ngaphambi kokuba abathengisi abakwi-Intanethi bezahlula kwiivenkile ezibonakalayo ngokunika izaphulelo ngoMvulo weCyber, ngoMvulo emva koLwesihlanu oMnyama, ngoku, bona kunye neapos, baphinde badibanisa kabini, baneentengiselwano ezifumanekayo kwiintsuku zombini kwaye, ewe, phakathi nangaphambi koko njengokuba. Ngokusisiseko, lixesha lokonga elipheleleyo.
Lo nyaka akufuneki ukuba wahluke kakhulu kunonyaka ophelileyo (ubuncinci kuloo nto), ngezaphulelo ezinkulu kwezinye zeekhompyuter zabathengi. Njenge:
Umxabisi ngento, isaphulelo esikhulu onokulindela. Izaphulelo eziqhelekileyo ezingezoMnyama ngoLwesihlanu zihlala zijikeleze iipesenti ezingama-20, ke nantoni na efikelela kuma-50% okanye nangaphezulu yinto enkulu. Gcina ukhumbula ukuba abanye abathengisi benkampani yesithathu eAmazon banokunyusa amaxabiso kwangaphambili ukuze ukuthengisa okumnyama ngoLwesihlanu kujongeke ngcono kunoko bakuko.
Ukuba sele unezicwangciso zokuthenga okuthile, ungazibhukimakhi izinto kwaye uqaphele amaxabiso, mhlawumbi ugcwalise ispredishithi ngalo lonke ulwazi kwindawo enye. Ngale ndlela, uya kukwazi ukuthatha inyathelo ngokukhawuleza kwaye unoluvo olulungileyo ukuba izivumelwano zilifanele ngokwenene. Oko kuyakunceda kulawulo lwakho lwempembelelo ukuba uziva ngathi unokuthenga into ongayidingiyo okanye oyifunayo.
Gcina iliso kwiiNtetho zoMbane. Abo bahlala benikezela ngezaphulelo ezinkulu kodwa bahlala kuphela iiyure ezimbalwa okanye de isitokhwe siphele.
Njengesikhumbuzo, uLwesihlanu omnyama kulo nyaka uwela nge-27 kaNovemba, ke ukuba awucwangcisi ukuya kwindawo yokuthenga, qiniseka ukuba ulungele ngelo xesha.
bukela ukuma kwehlaya kwi-intanethi simahla
Ixabiso leGalact 10 yexabiso kunye nomhla wokulindelwa okulindelweyo: kuhlalutyo olunzulu
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Iiklabhu zeRiphabhlikhi yakudala ngama-50% ekhutshiwe kwiVenkile yeGoogle Play
Ukujonga ukuba zingaphi imijikelezo yebhetri yebhetri yakho ye-Apple iPhone
Sukubhabha njenge-LG G6: ziimodeli zase-US nase-Canada kuphela eziya kufumana ukutshaja ngaphandle kwamacingo, ngabantu base-Asia kuphela abaya kufumana i-Hi-Fi audio
Java Fumana uMhla woMhla wangoku
I-Samsung Galaxy S20 Ultra vs S20 Plus vs S20: Ukuhlawulisa isantya ngokuthelekisa